घट्यो सुनको भाउ ,किन्ने होइन त सुन ? – Tufan Media News
घट्यो सुनको भाउ ,किन्ने होइन त सुन ?
४ पुष २०७८, आईतवार १२:१८
आइतबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ चार सय रुपैयाँले सस्तिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापा वाला सुन तोलामा चार सय रुपैयाँले घट्दै ९३ हजार ६०० रुपैयाँ कामय भएको हो ।
यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य समेत आज चार सय रुपैयाँले नै घट्दै ९३ हजार एकसय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । यता, चाँदीको मूल्य भने गत शुक्रबारको मूल्य पाँच रुपैयाँले घट्दै आज प्रतितोला एक हजार २४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
यो पनि : कैलालीमा गुडिरहेको ट्रकमा आ’गो लागेको छ। दाङबाट सिमेन्ट बोकेर धनगढी आउँदै गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश ०२–००१– ख ११५९ नम्बरको ट्रकमा बिहान आ’गो सल्किएको हो।ट्रकको पछाडिको टायरबाट आ’गो सल्किएको थियो। ट्रकका पछाडिका दुवै टायरमा क्षति पुगेको छ। अन्य कुनै क्षति भने भएको छैन। इलाका प्रहरी मालाखेतीका अनुसार चिया खानका लागि बिच बाटोमा रोकेका बेला कुनै समस्या नभएपनि अत्तरिया पुग्दै गर्दा गन्ध आउन थालेपछि रोक्ने बेला टायरमा एक्कासी आग’लागी भएको हो।
स्थानीयहरुले पानी हा’लेर आ’गो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेका थिए। पछि गोदावरी नगरपालिकाको दमकलले आ’गो नि’भाएको थियो।
लगातार बढेको सुनको मूल्य